***အလှကြိုက်တဲ့ ညီမငယ်လေးများ သတိပြုဖို့ *** | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Know-How, DIY » ***အလှကြိုက်တဲ့ ညီမငယ်လေးများ သတိပြုဖို့ ***
Posted by ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ်) on Aug 23, 2011 in Know-How, DIY |9comments
မိန်းကလေးတော်တော်များများ ဟာ အရွယ်ရောက်လာရင်တော့ အနည်းနဲ့ အများ အလှပြင်တတ်ကြတာချည်းပါပဲ။ တစ်ချို့ ကတော့ ကာလာစုံတဲ့ မျက်နှာကိုကြိုက်သလို တစ်ချို့ ကျတော့ သဘာအတိုင်းနေတာကိုကြိုက်ကြပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Make Up , Shampoo ဒါမှမဟုတ် Skincare ၀ယ်တိုင်း သတိပြုရမှာက…
သဏ္ဍန်လုပ် သရူပ်တူပေါ့နော်…ပုံမလှပေမယ့် မျက်စိထဲမြင်သာအောင် ပုံမှာ ပြူးပြီးကြည့်ပါ။
ကိုယ်ဟာ ခြောက်သွေ့ တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင် ဆိုရင်တော့ အလှပြင်ပစ္စည်းဝယ်တိုင်း For Dry Skin လို့ ရေးထားတာဝယ်သုံးပါ။ Cream တို့ Milk တို့ ပါတာတွေ သုံးပါ။ မြန်မာသနပ်ခါး မလိမ်းပါနဲ့ ။မြန်မာသနပ်ခါးဟာ အသားအရေကိုအေးစေပေမယ့် အဆီတွေကို စုပ်ယူလို့ အသားခြောက်စေပါတယ်။ သာမန်အသားအရေ (Normal Skin) နဲ့ မျက်နှာအသားအရေခြောက်သွေ့ တဲ့ (Dry Skin) တွေဟာ အရွယ်ကျတာပိုမြန်ပါတယ။်ပြီးတော့ တင်းတိပ်၊မှဲ့ ခြောက်ထွက်တာလဲ ပိုမြန်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် နေပူထဲ ထီးမပါဘဲ သွားတာ ရှောင်ပါ။Suncover,Sun screen, UV Protector .SPF…23 +++ ပါတာတွေသုံးပါ။ ရေများများသောက်ပါ။ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း မိတ်ကပ်တွေ သန့် စင်ပြီးမှ အိပ်ပါ။မအိပ်ခင်
ရုပ်လေးနဲ့ အကျင့် တခြားစီ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်။ဒါ့ကြောင့် လူလဲလှ အကျင့်လဲလှအောင် ကိုယ့်အကျင့်ကို ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ရမှာပါဘဲ။ပြီးတော့….
ရုပ်လှဖို့ ထက် စိတ်လှဖို့ အရေးကြီးသလို လူလှဖို့ ထက် ဘ၀ လှဖို့ အရေးကြီးပါတယ်.။ဒါ့ကြောင့်စိတ်ထားလေးတွေ နဲ့ ဘ၀လှဖို့ ကို လဲ ပြုပြင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဘ၀လှဖို့ အတွက်ကတော့…
“သဒ္ဒါ”…ဆိုတဲ့ သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုအလှဆင်ပါ။
“စာဂ”…ဆိုတဲ့ သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုအလှဆင်ပါ။
“ပညာ”…ဆိုတဲ့ သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုအလှဆင်ပါ။
*** ရတနာသုံးပါးကို ယုံကြည်မှုနှင့် ကိုးကွယ် ၍ …
“သဒ္ဒါ”…ဆိုတဲ့ သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုအလှဆင်ပါ။
“သီလ” ဆိုတဲ့ သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ကိုယ့်ဘ၀ကိုအလှဆင်ပါ။
“သုတ” ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရား နဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုအလှဆင်ပါ။
“စာဂ”…ဆိုတဲ့ သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုအလှဆင်ပါ။
“ပညာ”…ဆိုတဲ့ သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုအလှဆင်ပါ။
“ဟီရိ”..ဆိုတဲ့ သူတော်ကောင်း တရားနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုအလှဆင်ပါ။
“သြတ္တပ္ပ” ဆိုတဲ့ သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကိုအလှဆင်ပါ။
ထုလိုသိခွင့်ဝေမျှပေးတဲ့ ချမ်းချမ်းရေ ကျေးဇူးပါနော်။
လစဉ်သုံး စွန့် ပစ်ပစ္စည်းတွေကို အများသုံးအိမ်သာတွေမှာမျက်နှာလွဲခဲပစ် ထားပစ်ခဲ့တတ်ကြတာက တော့ အရေးတကြီးဖြစ်နေလို့ များလား အတမင်ဘဲ လုပ်သွားကြတာလားမသိပါဘူး။စိတ်တော့ ညစ်စရာကြီးပါ. အများသုံးအိမ်သာတွေမှာ ကတော့ အမြဲ လိုလို မတွေ့ ချင်အဆုံးပါဘဲ။ပီးတော့ အိမ်သာသန့် ၇ှင်းရေးလုပ်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေထဲမှာ ကိုယ့်အမေအရွယ် ၊အဒေါ်အရွယ် တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့ ကို ကိုယ်ချင်းစာပြီး အားနာပါ။ ရွံစရာ ပစ္စည်းကို မြင်လဲမြင်နေရ ။သိမ်းလဲသိမ်းနေရတော့ သူတို့ လဲ စိတ်တော်တော်လေး ညစ်နေမှာပါဘဲ
မိန်းမတွေ အဲ့ဒီပြသနာ အစိုးဆုံးပဲ …ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ့်လက်ကလွတ်ရင် ပြီးတာပဲဆိုပြီး လွယ်လွယ် ရှင်းထားလိုက်တယ်…နောက်လူကမြင်တော့ ..စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်တယ်… လူတိုင်းကတော့ သိပေမဲ့ … သိသာသိစေမမြင်စေနဲ့ဆိုတာ ရှိသေးတာပဲ … စာရေးသူခိုင်းနှိုင်းထားတဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေတောင် အသိတရာရှိသေးတယ် …တချို့မိန်းမတွေ အလွန်ဆိုးတယ် …
ကော်စမက်တစ်ကတော့ ၀ယ်တော့မယ်ဆို … ဒိတ်သေချာကြည့်တယ်… ဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်ရပြီး … ဒိတ်အောက်နေတာနဲ့တိုးမှာ အကြောက်ဆုံးပါပဲ …
လက်သည်းနီကလည်း တခါတလေ ဆိုးဖြစ်ပေမဲ့ … အိမ်အလုပ်လုပ် အိုးခွက်တိုက်နေရတာနဲ့… ဒီမနက်ဆိုးလျှင် ညနေပျက်တယ် … ဘာအမျိုးစားပဲသုံးသုံး ဒီလိုဖြစ်နေတော့ … လက်ကိုလုပ်ရတာ အလုပ်ပိုတာနဲ့… လက်သည်းလေးတွေ မတိုမရှည်ကိုပဲ … ဘာမှမဆိုးပဲ ဒီအတိုင်း ကြေးမရှိအောင်ထားတယ် … ။
ခြေသည်းလည်း ဒီအတိုင်းပဲ … အမြဲခလုပ်တိုက်နေတာနဲ့ ..သူများလို ခြေသည်းရှည်ကြီးတွေ ထားလို့မရတော့ … မတိုမရှည်လေးပဲ ထားပြီး နေ့တိုင်းကြေးမ၀င်အောင်တိုက်ပေးတယ်…
စာရေးပေးတဲ့ ချမ်းချမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် …ဗဟုသုတလည်းရပါတယ် .. ။
ပုံးမှာ အိတ်ကလေးတစ်လုံးလောက် ထည့်ပေးရင် သိမ်းရသူလည်း အဆင်ပြေပါတယ်
အသုံးပြုသူတွေလည်း ပုံးမရှိရင် အဆင်ပြေသလို ဟိုနားဒီနားထောင့်မှာထားရတာပါပဲ
သွားရင်းလာရင်းဆိုတော့လည်း မတတ်သာတော့လည်း…..(ဖုံးဖုံးဖိဖိစွန့်ပေ့ါလေ၊ ဗြဲလရမ်းတန်းကြီးကတော့ ရိုင်းတာပေ့ါ)
အဲဒီတော့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထည့်ဖို့ ပုံးလေးတစ်ခုလုပ်ပေးပြီး သုံးတဲ့လူတွေကလည်း စည်းကမ်းတကျ ပုံးထဲသာစွန့်သင့်ပါကြောင်း….။။။
ဟိုတယ်တွေမှာတော့ ပုံးလေးကို ပလတ်စတစ်အိတ်လေးခံပြီး ချထားပေးတယ် ..
အများသုံးအိမ်သာမှာ ပုံးချထားရင်လဲ အလစ်သုတ်ခံရမှာ စိုးလို့လား .. စရိတ် ချွေတာတာလား မသိ..
ချထားပေးရင်လဲ .. ဗုံးထည့်သွားရင် ပြဿနာလေ .. ဒါကြောင့် အမှိုက်ပစ်စရာ မထားတာ ထင်တယ် ..
အိမ်သာထဲ ဗုံးထည့်ရင်တော့ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်းဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲ
အဲလိုပုံးထဲထည့်ရင်လည်း အိမ်သာခန်းထဲဝင်နေတဲ့ တစ်ယောက်ပဲထိမှာပေ့ါ
မသကာ အပြင်ကလူတွေလည်း အနည်းအများထိလောက်မယ်
အလစ်သုတ်ဖို့တော့ အဲလိုပုံးအလစ်သုတ်ရင် ဘယ်နေရာမှာမှသုံးမရ၊ ရောင်းစားလို့ပဲရမယ်
အ၀မှာလည်း အစောင့်ရှိတော့ ပုံးကိုအလစ်သုတ်ဖို့တော့ မလွယ်လောက်ဘူး
ပြည်ပထွက်ခွာဘက်ကတော့ စပယ်ရှယ်ပေမယ့် ပြည်တွင်းထွက်ခွာဘက်က ဆိုးလိုက်တာ
ပိုစ်ကို ဖတ်ရင်းနဲ့ သတိထားမိတာကတော့ သိစေချင်တာတွေကို စေတနာ ရှေ့ထားရေးပေးထားတယ်လို့ မြင်မိတယ်။
ရွာသူလေး ချမ်းချမ်း လည်း လှလှ ပပ နဲ့ အမြဲ တင့်တယ်တဲ့ အမျိုးသမီး တယောက် ဖြစ်ပါစေ။